YEYINTNGE(CANADA): Sunday, June 19
အမေ... ၆၆မှသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျမ်းမာပါစေ...အမေချစ်တဲ့အိမ်.. အမေချစ်တဲ့သားသမီးတွေအတွက် ကြံကြံခံပေးနေတဲ့အမေ.. (အမှန်တရားဝါဒီတယောက်ရဲ့ ရင့်ကျူးသံ...) Burma ကိုသိလား မေးတော့မသိဖူးတဲ့..ဒါဆိုအောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရောဆိုတော့သိတယ်တဲ့အမေ...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/19/20110အကြံပြုခြင်း
19 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
1169K View Download
19 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
609K View Download
19 Jun 2011 Yeyintnge's Diary
အမေရိကန်က မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ အပေါင်းအပါများကို ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့မှု ပိုမိုပြုလုပ်သင့်ဟု USCB တိုက်တွန်း
မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၁
ယခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက Burmese Freedom and Democracy Act ဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အပေါင်းအပါများကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းကို အမေရိကန်လွှတ်တော်တွင် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားနေသူ အင်အားစုများက မိမိတို့ ပြည်နယ်နဲ့ မြို့နယ်များက လွှတ်တော်အမတ်များ၏ ထောက်ခံမဲရရှိရေး ဆက်သွယ်ဖိအားပေးကြရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင်း အထွေထွအကြပ်အတည်းများ ဆိုက်ရောက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ထောင်နဲ့ချီ ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ထားခြင်း၊ ထိုအချက်ကို လိမ်ညာဖုံးကွယ်နေခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိူးစုအားလုံးကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ဖိနှိပ်လျက်ရှိခြင်း၊ လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးဖြင့် ချုပ်ကိုင်လျက်ရှိခြင်းတုိ့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရကို ဆက်လက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ သက်တမ်းတိုးသွားရန် တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများက ရှင်းလင်း စည်းရုံးလျက်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မီတီ၏ ကြားနာမှု အစီအစဉ်တွင် ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် USCB အဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ကိုအောင်ဒင်က သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မြန်မာပြည်အပေါ် ငွေကြေးစီးပွားဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမျိူးကို တိုးချဲ့ပြုလုပ်ရန် အကြံပြု တင်ပြခဲ့သည်။ သြစတြေးလျက မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များ၊ မိသားစုများ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အပေါင်းအပါ စီးပွားဖက်များ၊ အကာအကွယ်ပေးသူများ၊ မိသားစုများ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၄၀၀ ကို စာရင်းပြုစု သတ်မှတ်ပြီး ငွေကြေးစီးပွားပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ထားကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အမေရိကန်၏ ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့မှုမှာ ထိုစာရင်းထက်စာလျင် များစွာ လျော့နည်းကြောင်း ထိုနမူနာကို ကြည့်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားသည်။
မိုးမခက နမူနာစာရင်းကို ကောက်ခံကြည့်ရာ အောက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လုပ်ငန်းများသည် လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရ၊ စစ်အုပ်စုတို့၏ အာဏာရှင်သက်တမ်းရှည်အောင် ထောက်ခံအားပေးကူညီနေသူများ ဖြစ်သည်ဟု စာရင်းတင်သွင်းလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
(တေဇ နဲ့ ထွန်းမြင့်နိုင် နဲ့ ဇော်ဇော်ကို တော့ အမေရိကန်ကပိတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်)
စစ်အုပ်စု၏ အပေါင်းအပါများ The Regime’s Cronies List
Connection With the Regime (စစ်အုပ်စုနှင့် ပတ်သက်ပုံ)
Aung Ko Win (aka) Sayar Kyaung
Kambawza Bank and Myanmar Billion Group, Owner of Kanbawza United Professional Soccer Club
Close tie with General Maung Aye
Shwe Than Lwin Trading
Myangon Myint Co.Ltd., USDP
Golden Flower Company Ltd.
Ruby Dragon Jade and Gems Co.Ltd
Eike Htun (aka) Ayke Htun (aka) Aik Tun
Olympic Construction Company and Asia Wealth Bank
Aung Myat (aka) Aung Myint
အောင်မြတ် (ခ) အောင်မြင့်
Dr. Sai Sam Htun
Loi Hein Company, Owner of Yadanarbon United Professional Soccer Club
Super One Group of Company
Yetagun Construction Company
Son of former Lt-General Ye Myint
Sit Taing Aung
Aung Yee Phyo Co., Suntac International Trading Co.Ltd
Son of former Minister of Forestry U Aung Phone
Sit Thway Aung
Son of former Prime Minister General Soe Win
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချူုပ်ကြီး စိုးဝင်း (ကွယ်လွန်) ၏ သား
Actor and Owner ofaMining Company
International Group of Entrepreneur Co.Ltd.
Son of Former Minister U Aung Thaung, now Secretary of USDP
Former Chairman of UMFCCI, Owner of Zayar Shwe Myay Professional Soccer Club
International Brewery Trading Co., Owner of Okkthar United Professional Soccer Club
U Khin Soe
Anwar Hlwan Co.Ltd.
Htun Naing Shwe
Myanmar Naing Group
Son of Than Shwe
Nilar Yoma Trading Co.Ltd.
Shwe Taung Development Ltd.
Shww Than Lwin Co.Ltd.
Fishery and Sea Products Co.Ltd.
Toe Naing Man
Red Link Co.Ltd.
Son of General Thura Shwe Mann
Grandson of Than Shwe
Zaw Win Shaine
Ayeyar Hintha Co.,Ltd., Owner of Delta United Professional Soccer Club
Dr.Tin Tun Oo
Myanmar Times and Pyi Myanmar
Dr. Nay Win Maung
Living Color, The Voice Media
Zinyaw Maung Maung
Moe San Pann Media Company
Son of Lt-Gen Tin Aye
Nann Kalayar Win
Popular, Popular News Media
Daughter of Lt-Gen Win Myint
Myo Aung (Botany)
Ko Ko Set Mu
Flowers News Media
U Chit Khaing
မြန်မာငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ Myanmar Egress
(ဓာတ်ပုံများ - အင်တာနက်၊ ဘီဘီစီနဲ့ မြန်မာစာနယ်ဇင်းများက ကူးယူပါတယ်)
စနေ, 18 ဇွန် 2011
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့  တရုတ်ပြည်ခရီးအတွင်း မြန်မာနဲ့ တရုတ်အစိုးရတို့ ရယူခဲ့တဲ့ သဘောတူချက်တွေထဲမှာ ရထားလမ်းတွေ တိုးချဲ့ ဖို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစတဲ့ ကျောက်ဖြူကနေ တရုတ်နယ်စပ် ဂျယ်ခေါင်အထိ ရထားလမ်းဖောက်ဖို့ သဘောတူပြီး မေလကုန်က ရွှေလီမှာ ရထားလမ်းအုတ်မြစ်ချပွဲ ကျင်းပကြောင်း တရုတ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ရထားလမ်းဟာ တံတားနဲ့ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေကို ဖြတ်သွားရမှာမို့ အလွန်ခက်ခဲမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ permafrost (ခေါ်) အမြဲတမ်း ရေခဲနေတဲ့ မြေအောက်လွှာပေါ်မှာ ရထားလမ်းဆောက်ဖို့ မဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆနေတဲ့ကြားက တရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တရုတ်-တိဗက်ရထားလမ်းကို (၅) နှစ်နဲ့ အပြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးနယ်ချဲ့ တွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ ရထားလမ်းတွေကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အင်အားကောင်းလာတဲ့အတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု တိုးတက်ထွန်းကားလာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းက နိုင်ငံခြားတင်ပို့ပြီး နိုင်ငံခြားပစ္စည်းကို တင်သွင်းနိုင်မှာမို့ တရုတ်အတွက်အများကြီး အကျိုးရှိမယ့် ရထားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကလည်း Cox’s Bazaar ဆိပ်ကမ်းက မြန်မာပြည်နယ်စပ်အထိ ရထားလမ်းဖောက်ပြီး တရုတ်၊ မြန်မာ ရထားလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နဲ့ ဈေးကွက်ကို ဖွင့်ပေးရာမှာ ရထားလမ်းဟာ အရေးပါအရာရောက်သလို အင်အားကြီးတဲ့ အရင်းရှင်ကို စီးပွားရေးနယ်ချဲ့ ခွင့် ပေးလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
66th Birthday Message by Daw Aung San Suu Kyi June 19 2011
ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်မှ ဇော်ထက်ကိုကို ၏ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်မှ သားဇော်ထက်ကိုကို၏ ဆန္ဒအရ ဤမွေးနေ့ဆုတောင်းအား စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ---ကိုဖိုးထောင်
A song for Daw Aung San Suu Kyi fromamyint on Vimeo.
အန်တီစုမွေးနေ့ သီချင်းပြိုင်ပွဲမှ ပထမဆုရ စမ်းချောင်းမြို့နယ်လူငယ်များ သီဆိုတဲ့ ... (အမောဖြေပါအမေ)
Videos Posted by Ah Bayah (Face Book)
amaw phay par amay.mp4
အမေရိကန်က မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ အပေါင်းအပါများကို ပစ်...
66th Birthday Message by Daw Aung San Suu Kyi June...
ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်မှ ဇော်ထက်ကိုကို ၏ မွေးနေ့ဆုတေ...
အန်တီစုမွေးနေ့ သီချင်းပြိုင်ပွဲမှ ပထမဆုရ စမ်းချောင...
၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ၊ မြန်မာနိ...